Umhla My Pet » Inyaniso Kwintlekele Malunga Ukuthandana Modern
Nantsi eyona nyaniso, asibi saba ubomi ol elungileyo’ iintsuku apho uthando xa emehlweni sokuqala awayiphethulela ukuthandana leyo yakhokelela obonwabisayo, umtshato elide. Kunye nenkqubo yokuqhubela phambili zobugcisa, ukoyika ukuzibophelela, kunye nezinga eliphezulu ukunganyaniseki, ukuthandana mihla lula. Yaye kwabo azalelwe kwenkulungwane yama-20 emva kwexesha, ngokukodwa ukuba nje kunzima kangakanani ukuthandana kunokuba.
Umntu othanda ngaphantsi inawo onke amagunya kubudlelwane kunye akukho bani ofuna ukuba lowo umdla ngakumbi kuba nje abasengozini kakhulu. Ngenxa yokuba asifuni ukubonakala ayikuthandi, sidla ukuthatha iiyure okanye amaxesha iintsuku kokubhaliweyo kwakhona. Ezi imidlalo zengqondo izinto ezazindonwabi- nabani.
ifowuni zi luhlobo ifayo zobugcisa. unxibelelwano Uninzi mihla kwenzeka ngokusebenzisa imiyalezo leyo okunene yeyona awungomntu lonxibelelwano.
Ukucwangcisa phambili kwaye sentlalo nemihla lidla ukuba soze yenzeke. Enkosi kwi eendaba zentlalo, omnye umdla uthando, kunye nabahlobo, imihla bakholisa ukuba kuthintelwe ngaphezulu mzuzu kunokuba ucinga izicwangciso ngaphandle.
amabinzana ezifana “masenze phola” kwaye “Ufuna zokudibana” ukuba ikhowudi “masenze uzidibanisa”. Yaye ngoxa abaninzi ukunkwantya lwalusekwenzeni ukuba ezi imiyalezo, bona kwawona ndlela ithandwayo ukumema umntu ukuze bachithe ixesha ezi ntsuku.
Abanye abantu andifuni ubudlelwane, bona nje bafuna uzidibanisa. ngelishwa, ixesha elininzi oku anditshongo kude emva isibakala. kwezintsuku, ngokunyaniseka isetyenziswa kunqabile kakhulu.
Abantu abaninzi bayazoyika ukuzinikela leyo ekhokelela “siya sithetha nje” ubudlelwane. Ayiceli nje ukuba le migca kukukhathazeka, ezi ubudlelwane badla soze wokugqibela. Ezi ubudlelwane ileyibhile-free Izihlando ezibini kuphela omnye umntu ukukopa kodwa ukususela ubudlelwane akazange igosa ngoko Izikali “kuze ngenene yenzeka”.
eendaba Social izele izilingo namathuba ukulahlekana. imiyalezo Private nangokufihlakeleyo zitshawula ezifana angayithandiyo umfanekiso ngokuqinisekileyo kwandisa amathuba ukukopa. Kwakhona eendaba Social ibonisa iinketho ukubona ukuba ngubani na omnye phandle phaya, ayisendim nje indlela ahlale exhulumene nosapho kunye nabahlobo. Media Loluntu zisetyenziselwa ukuvakalisa iimvakalelo. uhlaziyo engatshintshiyo kwaye ngeposi imifanekiso ngothando, ngoxa sinikhumbula ngqo, indlela entsha zokuchaza abo’ elivakalelwa.
ngelishwa, kwezintsuku, kunzima kakhulu ukubona omnye umntu engacocwanga ngokupheleleyo. ngokubanzi, abantu bayoyika ukuba lokwenene yaye azincame bekukho umntu kunxulumano. Le ngcamango usoyika kungenxa abafuni ukuba kuboniswa ngokungathi kufumaneka kakhulu, ukuxhalela kakhulu, dorky kakhulu, intle kakhulu, ekhuselekileyo kakhulu, kisayo ngokwaneleyo, etc. Yintoni ekufuneka sonke sazi ukuba xa fumane umntu, baya zizo zonke iinkalo kuwe.
okokugqibela, nawuphi na umntu ukuba ufumana ngokuthandana uya noba baphela iqabane lakho ubomi okanye ekugqibeleni uya kuyichitha – zombini ezi zinto ukuba isoyikisa. Nangona ukuthandana bale mihla le elula, kufanelekile oko ekugqibeleni. Kuba xa sisenza ufumanise ukuba omnye okhethekileyo, thina badla silixabisa kubo bonke ngokungakumbi njengoko uhambo nokufumana uthando lokwenene kusoloko kuyingenelo.